Dhinaca kale ma u rogi kartaa? – JOORNAAL
Dhinaca kale ma u rogi kartaa?
Waxaan leeyahay Jaakad aan dhinacaan rabo u gashado. Dhinac waa midab brown ah dhinaca kalena waa kaaki. Sidaas ayaa loo sameeyey. Marka waxaan ahay nin labo jaakadood leh. Waa fikrad cajiib ah. Waxaan fiiriyey maxaa kale oo sidaan loo gedin karaa?
Waxaan ogaaday in wax badan sidaan laga yeeli karo. Dalka shiinaha waxaa ka jira dhaqaatiir aad lacag bil walba oo caafimaad qabto aad siineyso, bisha aad xanuunsato lacag siin meysid, waayo shaqadooda ayaa ah in ay caafimaadkaaga ka shaqeeyaan!
Shirkad la yiraahdo Better Place waxaa ay soo bandhigtay hab ay gaari electric ah kugu siinayso bilaash waayo lacagta faa iidada waxaa ay ka sameysaa bateriga iyo korontada.
Shirkada Spotify waxaa ay dadka u ogoshay in ay dhageystaan heestay doonaan aduunka markii ay rabaan haddii ay bixiyaan lacag yar oo bil walba ah. Waxaa ay suuqa ka saartay wixii la koobi gareysan jiray iyo wixii CD dadka guryaha u ooli jiray oo dhan.
Shirkadan FreeConferenceCall waxaa ay lacagteeda ka heshaa shirkadaha telefoonada ee macaamiisheeda wax ba kama qaado oo waxaa ay u siiyaan daqiiqado bilaash ah ayadoo ay dadkaas isticmaalaan shirkadaha waa weyn kolkay dibada wacayaan laakiin koonfaransiga waa bilaash.
Sanadihii todobaatameeyadii IBM waxay Microsoft u ogalatay in ay Operating System computer da IBM geliso waayo markaas Software ka wax qiimo ah kuma fadhin oo lacagta waxaa laga sameyn jiray hardware ka. Sagaashameeyadii waxaa ay noqotay in ay hardware kii noqdo mid ku dhow bilaash waayo lacagta waxaa laga sameynaayey Software ka inteeda badan.
Hadda Google waxaa ay software kii u badashay bilaash waayo lacagta waxaa laga sameeyaa xayeysiinta iyo dacaayada.
Nin la yiraahdo Professor Dan Ariely oo ah macalin Psychology iyo Behavioral Economics ee jaamacada Duke ayaa wuxuu afti ka qaaday ardeydiisii. Ardada isma oga, wuxuu ku yiri sidaan. Waxaan garan la’ahay qiimaha aan ka dhigo gabayo aan rabo in aan idiin aqriyi. laakiin kala bar wuxuu weydiiyey ma bixineysaan $10 doolar qofkiiba haddii uu u aqriyo gabayo gaab gaaban, kuwo dhex dhexaad ah iyo kuwo dheer dheer.
Qaybta kale waxuu weydiiyey ma dhageysaneysaan gabayadaan haddii aan idin siiyo lacag ilaa $10 doolar ah.
Kuwii la yiri meeqa ayaad ogoshihiin waxaa ay soo jeediyeen in ay bixinayaan lacag dhan gabayada gaaban, dhex dhexaad iyo dheer qiime yaashaan $1, $2, iyo $3
Kuwii la yiri lacagta meeqa ayaa la idin siiyaa si aad u dhegeysataan waxaa ay soo ikhtiraaceen qiimahaan $1.30, $2.70, iyo $4.80.
Ganacsigii waxaa uu is gediyey 360 digrii markii la badalay malihii wax lagu miisaamaayey.
Hadaba waa maxay malahaagu (Assumptions)?
Ma laga yaabaa wax badan oo adiga aad lacag kaaga baxdo ay diyaar u yihiin in ay ayagu ku siiyaan lacag?
Ganacsiga aad ku jirto ma laga yaaba in la gedin karo oo dhinac kale faa iidada ka soo bixi karto?
Jaakadeyda waxaan kaloo u isticmaali karaa haddii la isoo cayrsado in aan dhinaca kale u gediyo oo koofi gashado oo noqdo nin kale… Ma laga yaabaa in wax badan aan sidaa nolosheena u gedin karno oo aanan haba yaraatee hadda fiiro gaara aanan u lahayn. Mar mar waa wanaagsantahay in aan miisaano waxyaabaha aan ku ku socono oo habit ka inoo noqday.
‹ PreviousXalinta Mushkiladaha
Next ›Aqoontu waa tarjumaad